WOWOW Kaydka Madbakha Madow ee Ganacsiga Guga oo leh Buufiye Ka Hor-Raaci
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Jiid qasabadaha Jikada / WOWOW Faashadda Madbakha Madow ee Ganacsiga Guga oo leh Buufiye Ka Hor-Raaci
Naqshad Sameynta - Qaansada sare ee wareegga 360 ° waxay siisaa meel ku filan hawl kasta oo jikada - nadiifinta, buuxinta, iwm. 90 ° naqshadaynta hal gacan oo la isku hagaajin karo way fududahay in la xakameeyo heerkulka biyaha iyo mugga socodka waqti isku mid ah.
Way fududahay in la rakibo - 1 ama 3 rakibidda daloolka. Waxaan ku siinnaa tilmaamo faahfaahsan, qalabka rakibidda iyo aaladaha, oo ay ku jiraan saxanka sagxadda daboolka, tuubada biyaha 0.5m ee hubinta tayada, galoofyada iyo wixii la mid ah. Si fudud u rakibidda naftaada bilaa tuubiste.
2 Hababka Biyaha -Madaxa Buufinta Ka Hor-Rinse waxay bixisaa buufin xoog leh oo xoog leh si ay u daadiso haraaga cuntada, waxay ku furnaan kartaa iyadoo leh hal riix riix oo aan u baahnayn in la hayo. Habka socodka si aad u buuxiso dheriyo waaweyn iyo digsi daqiiqado gudahood. Waxay ku shaqayn karaan isla waqtiga waxayna ku wareegi karaan 360 ° taas oo ka dhigaysa cunto karinta mid waxtar leh.
Dhisida naxaas adag -qasabadda buuxinta dheri culus oo ka samaysan naxaas adag oo miisaankeedu yahay 9.7 Ibs. Saxanka weelka naxaasta leh oo leh midab madow oo matte ah waa miridhku, daxalka, u adkaysiga daadinta, wuxuuna hubiyaa badbaadada biyaha iyo cimri dheer.
Adeegga macaamiisha -Waxaa daboolay 90 maalmood oo lacag la'aan ah iyo dammaanad 5 sano ah. Haddii aadan ku faraxsanayn wax su'aalo ah, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto.
SKU: 2312000B Categories: Qubeyska jikada, Jiid qasabadaha Jikada Tags: ganacsi, buufinta ka hor raaci
33.1 x 13.6 x 2.8 inji
Meel-Holo-keli ah ama Saddex-Hole-Buur
5-sano oo xaddidan oo xaddidan